Umboniso omtsha ohlekisa ngenkokeli yaseTshayina uXi Jinping uvula e-Itali
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » inkcubeko » Umboniso omtsha ohlekisa ngenkokeli yaseTshayina uXi Jinping uvula e-Itali
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zase China eziQhekezayo • inkcubeko • Education • ukonwatyiswa • Iindaba zikaRhulumente • Amalungelo abantu • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Umboniso omtsha wobugcisa ohlekisa ngenkokeli yaseTshayina uvula e-Itali
Amagosa aseTshayina azama ukufaka uxinzelelo kwisixeko ukuba sirhoxise isiganeko - kodwa abaququzeleli baqhubela phambili nangona kunjalo ngenjongo 'yokuxhasa inkululeko yokuthetha.'
Umzobi waseTshayina ochasayo u-Badiucao uhlekisa nge-propaganda ye-Beijing yamakomanisi kumboniso omtsha.
Umboniso omtsha ugxeka ingcinezelo yezopolitiko e-China kunye nokuhlolwa kweTshayina ngemvelaphi yentsholongwane ye-COVID-19.
Phambi komboniso wokuqala, i-China ibongoze amagosa ase-Italiya ukuba angawuyeki lo mboniso uqhubeke.
Kwimyuziyam yaseBrescia emantla e-Italiya ngoMgqibelo ophelileyo, umboniso woBugcisa "i-China (ayikufuphi)" ngumzobi ochasayo waseShanghai, eBadiucao, wavulwa kwimyuziyam eBrescia emantla e-Itali.
Sele kuvakala ukuba lo mboniso ungakhokelela kwihlazo elikhulu kwezozakuzo.
Igcisa eliphikisayo lidume ngemisebenzi yalo egxeka irekhodi lamalungelo oluntu eTshayina, kwaye lo mboniso unjalo.
Omnye wemisebenzi yamagcisa, ebonisa uMongameli waseTshayina uXi Jinping uwinnie ipooh, sele ebacaphukisile amagosa aseTshayina. Kwiminyaka emine eyadlulayo, umlingiswa weDisney waba lihlazo kunye nabasemagunyeni baseTshayina kwaye iinethiwekhi zaseTshayina zaqala ukucima ngokukhawuleza imifanekiso yeDisney. uwinnie ipooh, kuba ufana noXi Jinping.
Umzobi ukwanike imbeko kugqirha waseTshayina osuka eWuhan Li Wenliang, owayengowokuqala ukuchaza ukuqhambuka kwecoronavirus ngokubonisa amapolisa eleqa abaqhankqalazi. Kwaye kwenye yeepowusta ezihlekisayo zeeOlimpiki zaseBusika ezizayo, igcisa libonisa umdlali we-biaathlete ekhomba umpu kwibanjwa elivale amehlo laseUyghur.
Kwileta esemthethweni eya kuSodolophu waseBrescia, uMzi wozakuzo waseTshayina eRoma wathi lo mfanekiso “uzaliswe bubuxoki obunxamnye namaTshayina” yaye “uyagqwetha izibakala, usasaze inkcazelo ebubuxoki, ulahlekisa amaTaliyane yaye ukhubekisa ngokunzulu iimvakalelo. yabantu baseTshayina.”
Amagosa esixeko kunye nabagcini bemyuziyam, nangona kunjalo, baxinzelele phambili ngezicwangciso zalo mboniso.
“Kwafuneka ndiyifunde kabini le leta kuba indothusile,” ukhumbula oko uSekela Sodolophu waseBrescia Laura Castelletti, eyibiza ngokuba “lungenelelo” kwinkululeko yokuyila. Isicelo sokurhoxisa umboniso, wongeza, “safumana ingqalelo engakumbi.”
"Ngenxa yokuba ubugcisa bam buhlala bugxile kwimiba yamalungelo oluntu e-China ... indenza ndiphantse ndibe luhlobo lwe-1 yotshaba," u-Badiucao uxelele iintatheli.
"Nabani na ozame ukuthetha inyani okanye ibali elithile elahlukileyo kurhulumente waseTshayina uya kohlwaywa," utshilo uBadiucao.
“Yiyo ke loo nto, kum, kunzima ngokwenene ukuba nomboniso kwigalari esele imisiwe, imyuziyam efana nale,” wongeze watsho.
Omnye wemisebenzi evuselela ngakumbi ngumfanekiso oxubileyo kaMongameli waseTshayina uXi Jinping kunye Hong Kong umphathi oyintloko uCarrie Lam - ebonisa ukuhla kwamalungelo kwindawo eyayisakuba yi-British colony.
Kukwakho nothotho lwemizobo ye-64 yeewotshi ezenziwe ngumzobi ngegazi lakhe. Lo msebenzi ubhekisa kwiiwotshi ezanikwa amajoni aseTshayina awathatha inxaxheba kwindyikityha yokufa kabuhlungu eTiananmen Square ngowe-1989.
Lo mboniso ukwaquka isixhobo sokungcungcuthekisa esiye sayilwa ngokutsha njengesitulo esishukumayo. Kwiintsuku ezimbalwa zokuqala zomboniso, uBadiucao uya kuhlala kwisitulo sokuhlushwa kwaye afunde kwidayari eyathunyelwa kuye ngumhlali waseWuhan. Umsebenzi unika iinkcukacha zeentsuku ezili-100 zeerekhodi ukusuka kumanqanaba okuqala obhubhani we-coronavirus.
U-Badiucao uye waduma ngo-2011 emva kokuthumela iikhathuni kwi-Sina Weibo yase-China ephethe i-high-speed train crash e-Wenzhou. Imifanekiso ihlolwe amaxesha amaninzi, nangona umzobi ngoku ungummi wase-Australia, abasemagunyeni belizwe baqhubeka bemhlasela. Kwi-2018, umboniso ocwangcisiweyo womsebenzi wakhe eHong Kong wacinywa ngenxa "yezizathu zokhuseleko". Abaququzeleli bachaza esi sigqibo "ngezisongelo ezivela kubaphathi baseTshayina", kwaye kamva umculi wathi amalungu entsapho yakhe e-China ayesongelwa.